Annalena Baerbock oo lagu wado in ay noqon karta hoggaamiyaha cusub ee Jarmalka | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Annalena Baerbock oo lagu wado in ay noqon karta hoggaamiyaha cusub ee...
Annalena Baerbock oo lagu wado in ay noqon karta hoggaamiyaha cusub ee Jarmalka
Markii ugu horreysay, Ka dib taariikhda xisbiga ee 40 sano jirsaday, German Greens wuxuu ku dhawaaqay haweeneyda musharraxa ah ku mayalaysa doorashada Hoggaamiyaha Jarmalka.
Inkastoo mar laga dhex arkay qalalaaso iyo fadeexado soo wajahay xisbiga, hadda waxaa la rajeynayaa in Greens ay qeyb wayn ka noqdaan dowladda soo socota
Sikastaba, khilaafka ka dhex taagnaa xisbiga Green wuxuu soo jiray tobannaan sano, xaaladdana way ku xumeyd.
Sannadkii 2011, Gobolka qaniga ah ee Baden-Württemberg waxay dadkiisa doorteen Madixii ugu horreeyay ee Green ah, Winfried Kretschmann.
Aragtidiisa ku wajahan dhaqaalaha iyo deegaanka waxay sababeen in uu caan sii noqdo, kursigana ku sii fadhiyo.
Hadaba, Green waxaa u muuqato awoodda ugu sareysay oo diiradda uu ku hayo. Mana jiro qof kaaftan ka sameynaya xilligan.
Previous articleWaxaa jira cadho iyo cambaarayn ka timid taageerayaasha kubadda cagta
Next articleSafiirkii hore ee Mareykanka oo farmaajo ku tilmaamay shaqsi Mayal adag oo aan Naxariis lahayd.
Nidaamka federaalka ayaa la qaatay kadib 14 Sanno oo dagaalo qabiil & Mid deegaan lagu hoobtay, badanaa colaada ayaa ahayd mid Siyaasad qabiilaysan salka...